Nzira yekutumidza tambo yemukomana?
Kusvika iye zvino, hazvirevi kuti hazviwaniki kumba, izvo zvine imwe kana kunyange mhuka dzakasiyana-siyana. Vamwe vanogara vachiwana makate kana imbwa. Vamwe vanoda mamwe mhuka dzisina kusimba, somuenzaniso, mavhiri. Asi kunyange tortoise , kugara mumba, inofanira kuva nezita. Uye kana kusarudzwa kwezita kune makati-imbwa, kunyanya zvizere, zvinhu zvose zviri nyore uye zvakarongeka, kunyange pasi pemitemo yakananga, saka kana ukasarudza zita rehutu vadzidzisi vakawanda vangasangana nedambudziko. Saka, ngatitarirei pane imwe nyaya uye tinzwisise mubvunzo wekuti tingatumidza sei tambo yemukomana.
Mazita eVakomana 'Turtles
Inofanira kuonekwa nokukurumidza kuti hapana mimwe mitemo yakasarudzwa yekusarudza zita rehutu, kunyanya yevottles-boy-vanovimba nezvamunofarira. Kunyange, kune mamwe mazano. Chokutanga pane zvose, kuunza turtle mumba, tarisa zvishoma (munyaya iyi - nokuda kwake). Zvinokwanisika kuti zvimwe zvezviito zvechipfuwo chako zvichakuudza kuti ungazvitumidza sei. Semuenzaniso, mukomana anenge achikurumidza kuenda, iwe unogona kudana Sprinter, Champion, kana zvimwe Mhepo inofadza; nekufambisa mukomana zvakanaka zvakakodzera zita rakanaka Dancer, Twist kana Waltz. Sezvo zvese zvepasi pose nehove dzichichengeterwa mumba, zita racho rinogona kusarudzwa kubva ikozvino: Admiral, Sailor, Boatswain, Nelson, Nemo, Barguzin, Karakum.
Iwe unokwanisa sei kudana turtle mukomana? Mazita ekuremekedzwa nevanhu vanofarira nyanzvi uye vashandi vemafirimu, vanyori nevanyori, vateereri uye vatungamiri, vanhu vane mifananidzo yemifananidzo, nhau, nhoroondo dzechiGiriki dzinoparadzirwa. Heano mimwe mienzaniso yemazita eveji-vakomana: Jack (kubva kuna Tom Sawyer), Brahms, Beethoven, Darwin, Orpheus, haagoni kuita, hongu (kunyanya kana imba ine vana) uye pasina mazita evanhu vakawanda vane cartoon turtles-ninja, Michelangelo, Donatello , Raphael kana Leonardo.
Asi izvi zvose mazita ezvakabva kune dzimwe nyika. Uye kuti ndiudze sei turtle mukomana weRussia, ndinogona kutora zita rekutanga? Hungu, nhamba ipi zvayo! - Buttercup, Muswe, Cupcake, Captain, Pirate. Vamwe vanopa mazita avo vanofarira mazita evanhu - Paska, Vanyusha, Tolya, Misha, Nile, Kuzya.
Yeuka, chero zita raunosarudza nokuda kwechipfuwo chako, rinofanira kukonzera kushamwaridzana kwakanaka chete.
Nzira yekuita aviary sei imbwa?
Nzira yekudzidzisa sei york mudzimba?
Clicks kumakati eBritain
Nzira yekuchenesa sei aquarium?
Nei kate ikaruma kana iwe uchitsigira?
Turkeys - kubereka, kuchengetedza, kutarisira kumusha, nheyo dzinokosha dzekurima
Sei imbwa isingadyi?
Ndezvipi zviteshi zveYorkshire zvinogara?
Aquarium fish sword
Danio - kuchengetedza uye kutarisira
Ungatumidza sei zita remukomana uyu?
Nzira yekubatsira sei kati panguva yekuberekwa?
Snail ahaatin - kupfuura kudya?
Mifungiro yemufananidzo wekupfidza pamvura
Manicure yakashongedzwa 2018 - mazano akanaka epanguva itsva yezvipikiri zviduku uye zvakasara
Ingani makorikori ari mu halva?
Misi yemvura - recipe
Ndinogona kuisa girazi pamberi pesuo remukova here?
Yakagadziriswa acidity yemudumbu - zviratidzo
Vanhu vanoyeuka rini?
8 inonyanya kurumbidzwa kwemukomana kumadzimambo evanhu
Nzira yekubvisa mhombwe nokusingaperi?
Cikoni chekugadzira - kuti ungasarudza sei zvakanakisisa, mazano uye mazano
Inhalations ne saline neLazolvan
Mukati mukati memaoko emhando - maitiro ekugadzira maitiro anowanikwa kune munhu wese
Mamiriyoni mune nzvimbo dzepedyo
Chii chinobatsira pamusoro pemafuta ehove?
Funny knitted hats - funny and original models